के माेवार्इलमा भाइरस लागेर हैरान हुनुहुन्छ ? समाधानका यी पाँच उपाय - A complete Nepali news portal based on news & views
एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम (ओएस) भएको स्मार्टफोन प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दो छ । तर, यस्तो फोनमा भाइरसले कुनै न कुनै तरिकाले आक्रमण गर्न सक्छ । भाइरसले स्मार्टफोनको डाटा नै बिगारिदिन सक्छ । त्यसैले, यस्ता भाइरसलाई हटाउनैपर्छ । तर, कसरी ? कम्प्युटर टेक्निसियन युवराज भट्टराईले टिप्स दिएका छन् :
स्टेप १ : सेफ मोड रिबुट
स्टेप २ : डिभाइस सेटिङ
स्टेप ३ : मलिसस एप्स अनइन्स्टल
स्टेप ४ : डिभाइस एडमिनिस्ट्रेटर
स्टेप ५ : नर्मल मोडमा रिस्टार्ट
अनावश्यक एप हटाइदिएपछि एकपटक फेरि नर्मल मोडमा रिस्टार्ट गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईंको डिभाइस सेफ मोडबाट बाहिर आउ“छ भने भाइरस पनि हट्छ ।